डा. फ्रेड मिलग्रिम न्युयोर्कको क्विन्सस्थित अस्पतालका इमर्जेन्सी मेडिकल डाक्टर हुन् (जस्टिन जे. वे/दि एटलान्टिक)
‘म तपाईंलाई आफ्नो अस्पतालमा देख्न चाहन्नँ। अमेरिकाको कुनैपनि अस्पताल गएको देख्न चाहन्नँ। तपाईं आफ्नो घरबाट निस्केको म देख्न चाहन्नँ। अस्पताल भर्नाको आवश्यकता नपरुञ्जेल तपाईं कोरोना भाइरसको परीक्षण गर्न नजानुहोस्।’
इमर्जेन्सी विभागको प्रतीक्षालयमा बसेकामध्ये डेढ सय जनाजति ज्वरो आएका कारण चिन्तित छन्। पर्खिरहेका केही मान्छे परीक्षण गराउन मात्र आएका हुन्। अरु थुप्रैलाई तत्काल गम्भीर उपचारको खाँचो छ। मृत्युको मुखमा नपुगिसकेकाहरुले डाक्टरलाई भेट्न पनि ६, ८ वा १० घण्टा पर्खिनुपर्ने हुनसक्छ। अस्पतालमा भर्ना भइसकेकाहरुले बेड पाउन एक दिन कुर्नुपर्ने हुनसक्छ।
प्रकाशित: March 30, 2020 | 17:22:55 चैत १७, २०७६, सोमबार